Muddee 25 Hordooftoota Amantii Kristaanaa Biratti Guyyaa Ayyaanaa Beekam Ta'e
Muddee 25 hordooftoota Amantii kristaanaa biratti guyyaa ayyaanaa beekamoo ta'an keessaa tokko. Kunis waggoota 2000 dura gooftaa yesuus kan itti dhalatee ykn Krissmas jedhamee kabajama.Yesuus fakkeenya namaan kan dhalatee oolchaa fi ifa addunyaati jedhanii amanu.
Abbaa isaa Yoseef haadha isaa Maariyaam irraa kan dhalatee yesuus warri isaa hiyyeeyyii turan.Yesuus baatii qorraa fi dukkana callinsaan guutamee keessa dhalatee jedhamee beekama.
Waan hin dagatamnee tokko uummanni teessuma lafaa gama kaabaa keessa jiraataa turan baatii ijii aduu ija namaa jalaa duraa dhokkottee jirtu keessatti dhalachuu isaa ayyaaneeffatan.
Kunis ijii aduu baatileef dhokottus jijjiramnii akka jiru waadaa jiruun ture.
Sana booda namoonni bara durii sun kanneen addunyaa irra turan waggaa haaraatti jijjiramee simataniiijii aduu deebitee mullachuu ishee haala adda addaan ayyaaneeffatu.Bifii ayyaaneeffannaan bara sana turee yeroo ammaas kan itti gargaaraman hangii tokko jiru.
Ibsaa ibsuun durumaa kaasee kan jiru yoo ta'u Yesuus dhlachuu isaa baatii qorraa, cabbii fi dukkana keessa kabajuunis har'as hawaasa addunyaa biratti baratamaa dha.Gara Muddee 22tti warri Chaayinaa fi biyyonni Eshiyaa bahaa hedduun ayyaana DONGZHI jedhamu ayyaaneeffatu.
Yeroo itti maatii waliin wal ga'anii waggaa isa darbee itti yaadatan akkasumas baatii qorraa fi cabbii seenuu fi ifnii deebi'ee dhufuu isa ayyaaneeffatu.
Iraan keessatti ayyaanni YALDA jedhamu baatii qorraa fi vabbii keessa kabaju.Jaapaan keessatti ayyaanni TOJIjedhamu kan aadaan baratamee yeroo waggaa haaraan seenuu fayyaa fi carraa gaarii hawwuun kabaju.
Ayyaaneeffannaan kun bifa garaa garaa kan qabu ta'uus garu hunduu gammachuu fi hawwii gaariin kan guutamanii dha.Kristaanootaaf jaarraa hedduu dura kan ergamaan labsamee ture immo halkan duraa Yesuus itti dhalatee , haaraa dhalachuu fi waadaa isaa, nagaan guutuummaa biyya lafaaf irratti jechuun ilmaan namaaf hawwii gaarii qaba.
Waggaa waggaan yeroo guyyaa dhaloota gooftaa yesuus ayyaaneeffannu afuurri ayyaana kanaa isa dhugaa, isa nutii qabnu otoo hin taanee isa nutii kan eenyuu akka taanee itti hubannu ta'a.
Nutii tokkoon tokkoon keenya ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya kan itti hubannu dha.Dhugaa jiru kanatu madda gammachuu keenyaa ta'uun waggaa waggaan yaadatama.
Isa kanatu ayyaana ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus dhufee darbuu mara kan gammachuu fi jireenya guutuu godha jedhan prezidaant Traamp.
Biyyi keenya , lafa ijoolleen hundumtuu jaalalaan guutamuun keessa jiraatan, lafa itti hawaasnii abdiin guutamee keessa jiraatuu fi biyya amantiin eebbifamtee akka taatuuf ni kadhanna jechuun gulaalaan har'a yaada isaa xumuree jira.